I-NASA ifunda ngezintaba-mlilo zaseHawaii | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-NASA icwaninga ngezintaba-mlilo zaseHawaii
UMonica sanchez | | Ukwahlukanisa
Lapho sicabanga nge-NASA, imikhumbi-mkhathi, osomkhathi, isethelayithi leHubble elithumela izithombe ezihlaba umxhwele zomhlaba, amaplanethi nezinkanyezi ukuzihlola, kuvame ukufika engqondweni,… ngamafuphi, abantu nezinto ezingaphandle koMhlaba. Kodwa-ke, uzinikele futhi ekutadisheni izindawo ezahlukahlukene zalo mhlaba esizibiza ngekhaya.
Ekupheleni kukaJanuwari, ososayensi abavela eNASA, i-USGS Hawaiian Volcan Observatory (HVO), iHawaii Volcanoes National Park, kanye namanyuvesi amaningana wethule umkhankaso wamasonto ayisithupha wokutadisha ukuxhumana phakathi kwamagesi wentaba-mlilo nokukhishwa okushisayo, kanye nokugeleza kodaka, ukungahambi kahle kwezinto ezishisayo nezinye izinqubo ezisebenzayo zentaba-mlilo ukufunda ukuthi ungazinciphisa kanjani izingozi zezintaba-mlilo lapho ziqhuma.
Enye yezintaba-mlilo abazoyifunda yiKilauea, engenye yezinto ezisebenza kakhulu eMhlabeni. Ososayensi bazondiza ngamamitha ayi-19.800 ukuphakama endizeni ye-ER-2, ngaphakathi okukhona uchungechunge lwezinsimbi ezenzelwe ukukala ukukhanya kwelanga okukhanyayo nemisebe eshisayo ekhishwe emakhulwini eziteshi ezahlukahlukene.
bonke Le mininingwane izosiza abacwaningi ukuthi bafunde kabanzi ngokwakhiwa komhlaba, izinhlobo zamagesi kanye nokushisa., okuzosiza ukuqonda imvelo esihlala kuyo.
Kungani kubalulekile ukutadisha izintaba-mlilo?
Intaba-mlilo yaseKilauea, eHawaii
Lapho intaba-mlilo iqhuma, ixosha udaka, umlotha wentaba-mlilo, namagesi aqhamuka ngaphakathi kweplanethi yomhlaba. Lezi zinto ziyingozi kakhulu kubantu, ngoba zingadala izinkinga zokuphefumula noma ngisho nokufa.
Ngalesi sizathu, ukutadisha izintaba-mlilo kubaluleke kakhulu, ngoba kungathathwa izinyathelo ezisebenza kangcono ukuvikela abantu abahlala eduze kwanoma iyiphi yazo.
Uma ufuna ukwazi okwengeziwe, chofoza lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » I-NASA icwaninga ngezintaba-mlilo zaseHawaii
Uyini umswakama futhi ulinganiswa kanjani?
'Ugibe lwezemvelo' lungabulala iphengwini lase-Afrika